Ukuvuvukala imilenze emva emlenzeni: izimbangela, ukwelashwa. imithi okuzivuselela
Kungani kukhona ukuvuvukala emilenzeni ngemuva emlenzeni? Izizathu zalokhu mkhuba kuzoxoxwa ngakho mathiriyeli lo sihloko. Siphinde ngikuxoxele kanjani ukwelapha kahle isimo sokugembula.
Ukuvuvukala kwezinyawo emva ukwa umlenze kwenzeka kaningi. Ngaphambi kokuthi ngikutshele ukuthi kwenzeka kanjani ukuba balahle lesi simanga, kubalulekile ukuthola ukuthi iyini.
Edema - yinhlanganisela ethile emzimbeni ezithambile zomzimba. Isikhathi esining impela isimo sokugembula eba ngemva esitho ukulimala. Izazi lesi simanga kahle ukugeleza kwegazi endaweni elimele zomzimba.
Ukuvuvukala imilenze emva emlenzeni kungenzeka ngokushesha ngemuva ukulimala, kodwa futhi ukuthuthukisa ngemuva kwesikhathi esithile, kuhlanganise emva ukwa angenza noma yini.
Ukuvuvukala imilenze emva emlenzeni kungaba into eside wedlula. Umbhali wayevame ukunezela lokhu imbangela imiphumela enjalo ayiyinhle ukugeleza kwegazi hhayi kuphela, kodwa futhi ukulimala noma zingaphazamisi nemisipha noma imisipha izicubu, kanye nokuhluleka operation yabo evamile.
Lapho isimila ku abalimele esitho nesineke bangezwa ubuhlungu obukhulu futhi ngiyaqaqanjelwa. Futhi le ndawo ekushintsheni umbala kwesikhumba.
Kuleso simo, uma ukwa uvuliwe noma naphakathi-articular, comminuted noma bashiya amakhaya, ukuvuvukala kungabonakala nasemkhakheni hhayi kuphela ingxenye olimele we emlenzeni, kodwa lonke ubuso bayo.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ngezinye izikhathi iziguli enjalo ukuhlukumezeka ukulahlekelwa isikhumba luvelo isipiliyoni ngihlala ngisezinhlungwini, okwagcina kuholela ukwehla umsebenzi motor yomuntu. Ngenxa yalokhu, isiguli ingaqala eziyingozi.
Khonka ngomlenze wakhe ukwa - kuba isimo evamile. Kulokhu, ngokuvamile kakhulu kukhona izimo lapho, ngemva immobilization eside ithambo esitho kahle futhi ngokushesha coalesce, futhi ngemva kokususwa sigqoka, kuyilapho nokuvuselelwa lesiguli emlenzeni ukuvuvukala Kumiswa. Kulokhu, isikhumba uhlala ngaphandle umonakalo obonakalayo. ngokuthi "limfostazom" Ngo kwezokwelapha, inkinga enjalo.
Ngokusho ochwepheshe, ama-lymph edema kungenzeka ngenxa ukungasebenzi outflow kanye nokuthuthukiswa lymph. Kulokhu, ngenxa yokwephula isisulu seyonakele hhayi amathambo kuphela, kodwa futhi imithambo yegazi, izicubu ezizungezile, ekupholiseni izinzwa, imisipha, izindlala zamanzi, nemisipha nokunye.
Lapho lesi siguli lymphostasis bangezwa yezinkinga ezifana elephantiasis, fibrosis, isilonda, cystic nabanye. Kukhona amacala lapho edema of endaweni elimele, kuyinto uphawu yayo hhayi kuphela, kodwa kukhona ukuqina isikhumba.
Zikhona ezinye izizatho
Kungani ichichima umlenze ngemva ukwa (ukuthi benzeni kulesi simo, sizochaza ngezansi)? Njengomthetho, ephula ubuqotho amalunga nemisipha kulinganiselwe ukunyakaza. Baphinde babe ukuhamba ngokweqile kungase kubonakale. izenzakalo ezinjalo neqhaza ekuthuthukiseni edema ezinzima, okuyinto imbangela "wezinyo lendlovu 'noma amaqhubu ithambo izicubu.
Khonka ngomlenze wakhe akakubangeli ukubukeka puffiness. Kuyinto isimo sokugembula kubangelwa izizathu ezingafani nhlobo. Kodwa noma kunjalo, ukubukeka lezi zimpawu kumele ngokushesha ukubona udokotela, ngoba bangayinaka kuholela nemiphumela emibi kakhulu.
Indlela ukususa ukuvuvukala kusukela ophuke umlenze?
Kunezindlela eziningi kanjani ukuqeda edema okwenzeka ngemva ukulimala. Nokho, umuntu kufanele njalo kudokotela ukukhetha indlela okufaneleka kakhulu kunokunye. Lokhu kungenxa yokuthi yimuphi umuthi has ohlangothini ukuvuvukala yayo ukusabela kanye contraindications.
By the way, ukususa ukuvuvukala nasemilenzeni aphansi emva kokulimala kakhulu izidakamizwa bengayi kuphela yesimanje, kodwa futhi izinqubo ezikhethekile ukuthi kumelwe futhi batusa ukuba udokotela abanolwazi.
Ngakho kokukhipha ukuvuvukala kusukela ophuke umlenze? Izindlela ukuqeda lesi simo sokugembula, kukhona eziningana. Lezi zihlanganisa abantu, bendabuko futhi okunye.
Indlela evamile ukuqeda edema
Ukuze ususe esitho engezansi ukuvuvukala imithi okuzivuselela kudinga ukusetshenziswa okhilimu ahlukahlukene, si namafutha. Lezi imithi nezokusigcoba ukusiza ukuthuthukisa hhayi kuphela ukugeleza lymph, kodwa futhi ukugeleza kwegazi.
Ngokusho kochwepheshe, ikhambi edema kumele iqukathe heparin. Lena into okuqondene iqembu anticoagulant oqondile, okuyinto kuvimbela ekunqandeni futhi ngokushesha ususa noma isiphi ukuvuvukala.
Futhi emva esitho ukwa, odokotela bavame linqume iziguli zabo izidakamizwa eqeda ukuvuvukala kanye ketoprofenosoderzhaschie amalungiselelo ukusetshenziswa ngezihloko ezihlukene. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukisa ukugeleza kwegazi futhi amanzi lymph, abanye ochwepheshe batusa besebenzisa ketoprofenovuyu noma ihtiolovaya wamafutha. "Lawa mathuluzi ukukhiqiza umphumela ukufudumala, futhi ube anti-isimila umphumela. Sebenzisa lezi zinguquko yokugcoba akufanele kube izikhathi ezingaphezu kwezintathu ngosuku, basuke uye wakwenza bezihlikihla ku isayithi isikhumba kuze egxile ngokuphelele .
Ngaphezu izindlela ezivamile njengoba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye yokugcoba, imithi okuzivuselela ukhuthaza ukudubula esitho edema ngemva ukwa by ukwelashwa ezihlukahlukene ngokomzimba, kuhlanganise UV ngemisebe, electrophoresis, kagesi nezinye. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi izindlela ezinjalo musa njalo enze kube nokwenzeka ukubona umphumela ukwelashwa ngokushesha ngemuva kokuthi iqale.
Ngakho, ukuze akhulule edema of emkhawulweni aphansi emva ukwa, odokotela batusa ukuchitha:
ukushukuma agesi imisipha. inqubo enjalo ine imiphumela ezuzisayo on kwezicubu ngemva ukulimala.
Whirlpool noma massage njalo, ethuthukisa ukugeleza kwegazi ezicutshini ezilimele, kanye nokukhiqizwa outflow ka-lymph. Ukuze wenze lokhu massage ungakwazi ungumnikazi noma kubeke leli onguchwepheshe inqubo.
UV ngemisebe indawo umonakalo.
Ukuvuvukala imilenze ngemuva ukwa iqakala simo singenzeka kunoma yimuphi umuntu. Ngokuvamile, lokhu nesineke inkinga uya kudokotela. Kodwa uma zokwelapha ezivamile musa asize, kufanele sinake Sekuvele kufakazelwe amakhambi abantu.
Ukuze kuqedwe zokuzikhukhumeza imilenze imithi ehlukile inikeza ukusetshenziswa ezihlukahlukene amafutha ukuthi udinga ngobumnene ukukuthinta indawo yokulimala.
Ngenxa yalokho amakhambi abantu, ochwepheshe batusa ukusebenzisa umsedari, * nomthidari, noma ezinye amafutha, bese ugqugquzela izicubu ukuvuselelwa kunomphumela ukufudumala. Ngaphezu kwalokho, e imithi ehlukile abantu abaningi basebenzisa amaphakethe nobumba ekhethekile noma tincture. By endleleni, abanye babo zingafundwa ngisho ngaphakathi.
Cabanga amathuluzi amahle kakhulu futhi ethandwa ukuthi asebenza kakhulu ekuqedweni edema:
Ikhemisi ubumba eluhlaza. I powder buhlanjululwe ngamanzi amancane, bese wenza mass okuholela ikhekhe, okumele kutsetselelwe endaweni ezilimele. It sisetshenziswa esizeni ukwa ngemizuzu engaba 40-55. ukulibopha okunjalo kufanele kwenziwe kathathu ngosuku.
uwoyela Fir uye wakwenza wagcoba esikhunjeni lapho zokuzikhukhumeza kwezicubu siyenzeka. Le nqubo kumele kwenziwe ngokushesha ngemuva kokulala ngqo phambi kwakhe.
Ukumnika of arnica. Ukuze silungiselele lokhu isixazululo antitumor eziningana nezinkezo ezinkulu comminuted isitshalo ugcwele amanzi ashisayo (amanzi abilayo) futhi bagcizelele ihora. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ilitha loketshezi kuyadingeka ukuthatha cishe 30 amagremu arnica. Njengoba isikhathi sihamba, lesi ukumnika is elicwengekileyo ngokusebenzisa cheesecloth bese ukuyisebenzisela wokuthoba kanye lotions, ezisetshenziswa kuzo isayithi ukwa ngoba 1/4 ihora ngaphambi sokulala.
Vertebral Umthambo syndrome. Imbangela nemphumela.
Ithumba - kuyini nokuthi kungani kukhona?
Kuyini tachycardia. Izimbangela, ukwelapha lesi uphawu
Sinuses nezifo zabo
Myositis ossificans: isithombe, izimpawu, imiphumela, ukwelashwa. Yiziphi izibikezelo for the nokwelashwa kweziguli myositis ossificans?
Kuthiwani uma izingono shelled?
Kuyini izimiso zokuhle? Indlela ihluke zokuziphatha?
"Sun" (ukuzilibazisa isikhungo, Cheboksary): incazelo, amasevisi, indawo kanye nokubuyekeza
Pistols "Desert Eagle": kokusungulwa abathanda
City Delphi, Greece: izikhangibavakashi, izithombe
History Museum (Sifundazwe, Russia): Ikheli, Amahora okuvula, embukisweni
Ithebula-ncwadi wokukha emashalofini - ifenisha ukhululekile ze ezindlini ezincane
Kuyini Combined Tours
Kanjani ukubuyela emuva Windows 8 uhlelo? Kanjani ukubuyela emuva ukuthuthukiswa kusukela Windows 8?
Yegilo Sibekezele: Ukwelashwa, Izimbangela, Izimpawu
"Clotrimazole" - amaphilisi for thrush: indlela yokufaka isicelo sokukhulelwa, ne-GV namadoda, ukubuyekezwa